Microsoft Win 10 64bit Pro OEM Version ee French
● rakibo Version Faransiis iyo dardargelinta by internet, taageertaa warsiinta rasmi online.
● damaanad edition Real OEM, jaanqaadaan nidaamka 64bits, shaqo buuxda ka mid ah
● Faransiis ayaa cover Security, Made in USA, Made in Ireland, Made in Singapore, iwm
Edition: OEM Faransiis
Waqti Lead: 24 Hours
1.Windows 10 aad siinaysaa waayo-aragnimo ugu fiican ee si degdeg ah laga bilaabo iyo helidda inay wax qabsoomaan
hello 2.Windows waxaa password-free ah calaamad-in in, jidka ugu dhakhsaha badan ugu ammaan in lagu furo qalabka Windows idin siinayo
3.Windows 10 samatabbixiyaa ilaalinta dhamaystiran - oo ay ku jiraan antivirus, firewall, ilaalinta Internet, iyo in ka badan
sirta xogta Bitlocker iyo caawimaad ilaalinta ilaalin macluumaadkaaga badbaado
shaqeynayaan 4.Hyper-v kuu ogolaanaysaa inaad abuuro mashiinada dalwaddii, halka desktop fog kuu ogolaanayaa inaad si ay u gasho in ka computer ka duwan
Title: Windows 10 USB Pro Full Version 64Bit English-International
Erayada Muhiimka ah: daaqadaha nidaamka 10 hawlgalka; guuleysato 10 pro version buuxa
Windows 10 System Pro Operating: log-in, a ku xigeenka digital shakhsi Remote, oo awood u leh inay ordi desktops badan dalwaddii kaa caawin doona inaad si loo kordhiyo wax soo saarka. Sawir ama qor ku qoran boggaga web iyo iyaga wadaagaan sida qoraalada kartoo. Marka waxa la joogaa wakhtigii si ay u nasato, waxaad qulquli karaan Xbox One content si aad u Windows 10 PC, laptop, ama kiniin.
Waxaad qaadataa qoraalo in browser web Microsoft Edge cusub
Soo bax, muujiyo, ama si toos ah u qor bogga web via touchscreen ama mouse a a, ka dibna qoraal aad la wadaagto dadka kale.
Habee menu Start
Dooro in uu soo bandhigo aad apps ugu isticmaalay ama dhawaan ku daray, fayl gaar ah, ama goobaha nidaamka.
Orod nidaamyada hawlgalka badan hal PC
Abuur mashiinada dalwaddii la Hyper-V in uu ordo wax ka badan hal nidaamka qalliinka waqti isku mid ah. (Hyper-V waxay u baahan tahay nidaamka 64-bit la awoodaha SLAT oo dheeraad ah RAM 2GB.)
Log in meel fog laga la Desktop Remote
Log galay Windows 10 Pro guriga, xafiiska, ama halka safraya. (Khadka Internetka loo baahan yahay, ajuurada ISP codsan kartaa.)
Helaan qalab aad by isticmaalaya faraha, wejiga, ama iris
Dooro Windows 10 aaladaha la Windows Hello aqoonsan doono hortiinna, furayay oo aan baahida loo qabo in password a. (Baahan yahay akhristaha faraha, ama shidma IR ama calaamadaha jismiyeed.)
Shaashadaha qabsadaan si haboon qalabka aad
orientation Onscreen badala qaab si aad u oggolaatid navigation fudud, iyo Apps qiyaasta in qaab oo kala duwan oo cabbirkooda.
Windows 10 Pro isku xira in ganacsiga ama dugsiga domain si ay u helaan files network, server, madbacadaha, iyo in ka badan.
Play kulan Xbox One on Windows 10
Qulquli aad kulan Xbox One in a Windows 10 PC, laptop, ama kiniin. Play kulan filaayo in Windows 10, ama rikoorka iyo wadaagaan daqiiqado ciyaaraha la Game ee DVR dhisay-in. (Broadband Internet loo baahan yahay.)
Si fudud multitask on mid screen
Dhag ilaa afar apps in shaashadda, ama abuuro desktops dalwaddii si aad u hesho meel bannaan oo dheeraad ah si ay ula waxyaabaha aad u baahan tahay shaqeeyaan.
caawimaad ka kaaliyaha shakhsi digital Helo
Cortana caawisaa guud ahaan aad Windows 10 aaladaha, dejinta xusuusinta, caawiyo si ay u qoraan emails, ama marti CHAT leh saaxiibadaa iyo xubnaha qoyska. (Waayo-aragnimo Cortana kala duwanaan karaan by gobolka iyo qalab.)
In kor loo qaado ammaanka xogta
Windows 10 dalabyo Pro encryption la technology BitLocker, iyo updates automatic la Update Windows, si ay u difaacdo xogta gaarka ah. (BitLocker u baahan tahay isku halleeyey Platform Module 1.2 ama 2.0, ama flash USB ah.)
Ku haboon u heli codsiyada
Windows 10 Pro kuu ogolaanayaa inaad u abuuraan qaybta app adiga kuu gaar ah ee Store Windows in ay si deg deg ah u helaan codsiyada. (Number of codsiyada in la wareegtay karaa xalka ugu yar ee codsiga ku xirnaan doontaa.)
Previous: Microsoft Win 10 Pro 64bit OEM Version in FQC08929 ingiriisiga
Next: Microsoft Win 10 64bit Pro OEM Version ee French la shaqeyn online Key Serial
Ka hor inta aad kala soo bixi Windows 10 Professional, aad computer waa in uu yeesho shuruudaha soo socda:
Processor: 1 gigahertz (GHz) ama si degdeg ah.
RAM: 1-ki gigabyte (GB) (32-bit) ama 2 GB (64-bit)
meel disk adag Free: 16 GB.
Kaadhka Graphics: Microsoft DirectX 9 sawiro qalab iyadoo malag hoggaamin WDDM.
Genuine Microsoft Windows 10 PRO 64Bit French V...